नेपालमा भेटियो स्व*र्ण क*छुवा, ॐ लेखी संसारभर सेयर गरौं – Sandesh Press
May 30, 2021 518
आजको युग भनेको भगवान र यसका अनुयायी हरुको युग हो ! चोखो मनले चितायमा संसार सफा देखिनेछ !तपाइको मनको कामना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चोखो मनले ओम लेखेर सियर गर्नुहोस !
भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा सबैतिर पूजा गरिने स्व*र्ण क*छुवा नेपालमा भेटियो, ॐ लेखेर सेयर गर्नुभएमा तपाइको जय हुनेछ ! स्वर्ण कछुवालाई नेपालमा हिन्दु धर्म मा,न्ने,हरुले भगवान विष्णुको रुपमा मान्छन् । भगवान विष्णुको अवतारहरु मध्य एउटा कछुवाको अवतार पनि भएको धार्मीक मान्यता रहेको छ । त्यो कछुवा स्वर्ण कछुवा हो । भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको छ। वि,श्वमै निकै दु*र्लभ मानिने स्व*र्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको हो ।
विश्व,भर यो प्रजातीको कछुवा देखिएको यो पाचौँ पटक हो। भगवान विष्णुले पृथ्वीलाई ध्व*स्त हुनबाट जोगाउनका लागि स्वर्ण कछुवाको रुप धारण गरेको हिन्दु धर्ममा पौराणिक कथन छ। स्वर्ण कछुवा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा फेला परेको हो।
जनवार विज्ञ कमल देवकोटोकाले यो प्रजातीको कछुवा नेपालमा पहिलो पटक र वि,श्वमै पाँचौ पटकमात्रै फेला परेको जनाएका छन्। स्वर्ण रङको कछुवा नेपालसँगै आहिले विश्व,का अन्य देशमा समेत फेला परेको जनाइएको छ।आजको युग भनेको भगवान र यसका अनुयायी हरुको युग हो ! चोखो मनले चितायमा संसार सफा देखिनेछ !तपाइको मनको कामना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चोखो मनले ओम लेखेर सियर गर्नुहोस !
जनवार विज्ञ कमल देवकोटोकाले यो प्रजातीको कछुवा नेपालमा पहिलो पटक र वि,श्वमै पाँचौ पटकमात्रै फेला परेको जनाएका छन्। स्वर्ण रङको कछुवा नेपालसँगै आहिले विश्व,का अन्य देशमा समेत फेला परेको जनाइएको छ।
Prevसरकारी अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा सुत्केरीले ज्यान गुमाइन् ७ जनाको ज्यान गयो, बिरामीको यस्तो छ चित्कार (भिडियो हेर्नुस्)
Nextधेरै पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना थियो तर यति कलिलै उमेरमा सधैका लागि अस्ताए
के तपाईको कुन्डलीमा छ मंगल दोष ? यी उपाय गर्नुहोस्